United Stasi yeAmerica Archive - Kodzero dzevanhu & Chiedza Art na ∴ PixelHELPER Foundation
United Stasi yekuAmerica
22 Dai 2011
Ndiani anotarisa varindi. Mushandira wokurwisana nekucherechedza
Nhau dzinomuka uye dzinopararira pasekondi yega yega. Mushure meimwe nhau, nyika inoita kunge irikushanduka zvakasiyana nekare. Nhau dzinobata hupenyu hwedu. Tinomuka newe ndokuenda newe muhusiku. Hazvina mhosva kuti uri kupi pasi rose chero nguva, shavishavi rinorova mapapiro aro. Uye chimwe chinhu chinogona kusimuka chine chirevo kwatiri. Tekinoroji dzazvino uno dzaita kuti nyika ive diki Asi makakatanwa ematunhu nepasirese anoita kunge ari kukura. Vazhinji vanoshamisika kuti ndiani waunovimba naye. Ndeupi ruzivo rwuchiri kuvimbika uye kana rugare uye budiriro muGerman zvichiramba. Apa ndipo panotangira basa redu. Uye mune yepasi rese network tinogadzira hwaro hwakavimbika, dzimwe nguva panjodzi huru, nekuti zvinotora kureba kwemaoko kumberi kuti uite zvine mutsindo. Yakazara & nekuvimbika yakazvipira kuvanhu kuchengetedza Germany.
Nyorera izvozvi - kune iyo yakajeka nyika!
TED Taura kupesana nekutarisa
Surveillance State: "NSA muImba"
uye United Stasi yekuAmerica akamira pamadziro eAmerican Embassy muBerlin uye mamwe maAmerica mazita eGermany, kusanganisira Dusseldorf, Frankfurt naHamburg. Chikonzero cheiyi kutsvaga kusanyadzisa paNSA uye neAmerican secret secret service.
NSA inodzivirira urongwa hwayo hwekutsvaga sezvinodiwa kurwisana nehugandanga. Zvakare, zvinoruramisa pachako nokutaura, "Kana usina chinhu chokuvanza, iwe haufaniri kutya". Zvinosuruvarisa, kuongororwa kweNSA kunowedzera zvakanyanya mukurwisana kwekutya. Nhare yako, Skype, Whatsapp runhare inogona kuongororwa, kunyange iwe usina chokuita nemagandanga, uchishandisa "3rd Degree Friend".
Mukuwedzera, nzira idzi dzekuongorora dzakadzivirira chete 4 kurwisa. Iko inofanirwa here nehutano hwedu nokuti hunoonekwa asi husina kunyatsogadzikana hunosiya? PixelHELPER haatendi mairi, ndicho chikonzero takatanga purogiramu iyi.
Kubudirira kwekutanga mushure mekunge 13 chiedza chekujekesa, mumutambo wevhiki nevhiki nekukurukurwa kwemashoko makuru:
Kubva kweGermany's top CIA man boss.
Ndiani anotarisa varindi. Mushandira wokurwisana nekucherechedza April 21st, 2020Oliver Bienkowski